Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy ny fahavononana hiray hina no tsy ampy | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy ny fahavononana hiray hina no tsy ampy
Nizara roa ny fotoana tsy iasana nentina ho fanajana ny vahoaka sy ny firenena ho an’ny famaranana ny Ramadan ao amin’ny finoana silamo. Nisy ireo nanokana ny talata fahaefatry ny volana ho andro tsy fiasana, maro koa anefa teo andaniny no nino fa ny andro alarobia fahadimin’ny volana no voatokana ho an’izany, ka na orinasa na fivarotana na toeram-pianarana dia samy nahitana tsy fampiantona ny asa sy adidy maha seriny azy andavanandro.
Ny fitondrana irery moa no hany mahefa hanapaka sy handidy andro iray ho andro tsy fiasana. Tsy sanatria angamba noho ny fisiana fifanolanan-kevitra tao anatin’ny governemanta raha teo anivon’ny mponina samy naheno fanambarana sendra azy sy nampihatra ny didy araka izay. Tompom-pahefana ambony telo angamba no tompon’andraikitra mivantana eo amin’ny fanatanterahana ny didy noraisin’ny governemanta. Voalohany amin’izany ny praiminisitra, araka ny laharana misy azy amin’ny maha mpitarika ny asan’ny governemanta, eo koa ny minisitra mpitondra teny manana adidy amin’ny fampielezana eo amin’ny firaisamonina ny fanapahana noraisin’ny fanjakana. Raha mikasika ity raharaha iray ity, izay fanokanana andro iray tsy hiasana, dia manana adidy manokana koa ny minisitra miandraikitra ny tontolon’ny asa, asa izay mety ho adidy mivantana tokony iandraiketan’ny minisitra miadidy ny fampianarana.
Raha marina tokoa fa nisy fanambarana nifandingana avy amin’ireo tompon’andraikitra ambony ireo, dia mitory izany fa misy fanitsiana ilaina momban’ny serasera amin’izy samy izy mpikambana ao anatin’ny fitantanana. Na eo aza izany, eo koa ny antony izay manamaivana ny anjara adidin’izy ireo teo amin’ny fisehoan’ny fifandiparan’ny andro natao ho fanajana tonon’andro silamo ity. Ireo tompon’andraikitra ao amin’ity finoana ity dia nizara roa koa teo amin’ny fanondroana ny andro famaranana ny Ramadan. Samy manana ny fomba fanaovany ny kajikajy moa ireo sampana samihafa. Tsy iray araka ny fiheveran’ny maro ny finoana silamo, toy ny finoana maro manana sampantsampana maro, ka na Filazantsara iray aza ohatra no iombonana ho fototry ny finoana kristiana, dia samy manana ny fomba famakiana ny teny ao anatin’ilay filazantsara ny sampana tsirairay.
Fomba vao santarina koa moa ny fankalazana ity tonon’andro silamo ity, ka tsy nilaozan’ny indro kelin’ny mpandrafitra. Nisy ihany angamba ireo nanararaotra ilay savorivory teo amin’ny fanondron’andro, ka tsy nanaja ny fampiantoana asa na ny talata na ny alarobia, fa ny ankamaron’ny olona dia azo heverina fa miombon-kevitra amin’ny maha rariny ny antony anajàna andro masina iray eo amin’ny fivavahana silamo.